မကြောက်ပါနဲ့ (အစ/အဆုံး) – Grab Love Story
သရက်မြို့ ဟိုက်စကူးကျောင်းကြီးမှာ မြို့၏ အနောက်မြောက်စွန်း တောင်ကုန်းကလေး တစ်ခုပေါ်၌ သပ်ရပ်လှပမှုဖြင့် တင့်တယ်စွာ ရှိနေပါသည်။ မြောက်ဘက်ဘောလုံးကွင်း၊ တပ်ကွင်း၊ လွင်ပြင်များဆီမှ တိုက်ခတ်လာသော လေပြေအေးများမှာလည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ် သည်နှင့်အမျှ အေးမြလှသည်။
ထိုလေပြေအေးတို့ကို တိုက်ခတ်ခံရင်း ကျောင်းဘေးပတ်လည်၌ ပြေးကာခုန်ကာ ကစားနေကြသော ကလေးသူငယ် အရွယ်ပေါင်းစုံမှာလည်း ရွှင်ရွှင်မြုးလျှက် ပျော်မြူးနေကြသည်။ ကျောင်းဘေး ပတ်လည်တွင် စီတန်းလျှက် စိုက်ပျိုးထားသော ဇလပ်ပန်းများမှာလည်း ရာသီမရွေး အပွင့်အဖူးများဖြင့် ဖြူဖြူဖွေးလျှက် ရှိနေကြသည်။
ကျောင်း၏ မြောက်ဘက်သို့ ထိုးထွက်ဆောက်လုပ်ထားသော ခန်းမဆောင်ကြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဇလပ်ပင်များသည် ပိုပို၍ပင် ပွင့်နေကြသည်။ အပင်တိုင်း၏ အောက်တွင် ဇလပ်ပွင့်များသည် ကြွေကျလျှက် ကောက်သူ ပန်သူများကို ငံ့လင့်လဲလျောင်းကာ ရှိနေကြသည်။ ထိုခန်းမကြီး၏ အရှေ့ဘက် ကလေးများ အနည်းငယ်ရှင်းရာ အုတ်လှေခါးထစ်ဘေး ဇလပ်ပင်တွင် ၁၂နှစ် ၁၃နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး ၅ယောက်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။
၄ယောက်မှာ အပင်များအောက်၌ ကြွေကျနေသော ဇလပ်ပွင့်များကို ကောက်ကာ ကြိုးဖြင့် သီကုံးနေကြသည်။ ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်ကတော့ အခြားကလေးများနှင့် မတူ အပင်အောက်၌ ကြွေကျနေသော အပွင့်လေးများကို သတိပင်မပြု အဖက်မျှမလုပ်ပဲ အပင်မြင့်ထက်မှာ ရှိနေသည့် အပွင့်များသို့သာ အာရုံပြုရင်း ခြေဖျားလေးကို မမှီ့တမှီထောက်ကာ လှပေ့ချောပေ့ဆိုသည့် ပန်းများကိုသာ ရွေးကာခူးဆွတ်ရင်း သီကုံးနေလေသည်။ အတန်ကြာလျှင် အောက်၌ ပန်းကောက်နေသော သူများထဲမှ တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စ ထလာကြကာ …
“ပန်းလေးတွေကသိပ်လှတာပဲကွယ် .. မူတော့အိမ်ကျ မမကိုပေးဖို့ တစ်ကုံးရပြီဆရာ .. “
“အို .. ကိုယ်တော့ဆရာ မေမေ့ကိုပေးမယ်”
“အို .. ငါတော့ဆရာ ဘုရားကိုတင်မှာ”
“အမယ် .. ငါတော့ဆရာ . .ဘယ်သူ့မှမပေးဘူး။ အိမ်နားကဒေါ်ခင်တုတ်ကို ၂ပြားနဲ့ရောင်းမယ်ဆရာ။ ဒါမှမုန့်ဝယ်စားရမယ်”
၁၂နှစ်၁၃နှစ်အရွယ် ကလေးမများမှာ သူတို့လှဖို့ထက် သူတို့နှင့် ပက်သက်သည့် အကြီးများလှဖို့၊ ဘုရားတင်ဖိုံ့၊ မုန့်ဖိုးရဖို့မျှသာ တွေးတတ်လျှက်၊ တစ်ဦးစီ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကိုယ်ဖော်ပြနေကြသလောက် မတ်တပ်ရပ်လျှက်မှ ခူးရင်း သီကုံးနေသည့် ကလေးမလေးကတော့ သူတို့အားလုံးကို မျက်လုံးလေးစွေကြည့်ရင်း သူမသီကုံးပြီးထားသော ပန်းကုံးကိုလည်း လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခေါင်းထက်မှာ သီကာဝိုက်ပန်လျှက် …
“ဟေ့ မလှလား … ကြည့်ပန်းတွေကသိပ်လှတယ်ဆရာ၊ အောက်ကျပြီးသားလဲ မဟုတ်ဘူး”
ထိုသို့အပြောလိုက်တွင် အားလုံးသော ကလေးမများမှာ သူမဘက်သို့ လှည့်လျှက် ကြည့်လိုက်ကြသည်။
“ဟေ့ . ကြည်ကသိပ်လှတာပဲကွယ် . နော်”
မနာလိုဝန်တိုစိတ် အလျှင်းမရှိကြသေးသော အရွယ်များ ဖြစ်သည့်အလျှောက် ဖွံ့ဖွံ့ကားကား ဖြူသွယ်တန်းလျှက် ကလေးမလေးအလှကို ဝေကာဆင့်နေသည့် ပန်းကုံးကိုကြည့်လိုက်၊ ပန်းပန်သူကို ကြည့်လိုက်ဖြင့် အားလုံးသော ကလေးမလေးများမှာ သဘောကျနေကြသည်။ သို့သော်က လေးအရွယ်ဘာဝ အလှတွင်သာ အမြဲမနစ်မြောတတ်၊ ကစားဖို့ကလဲ ရှိပါသေးသည်။
“လာကွယ် .. ဟိုဘက်ကစားရုံထဲ သွားကစားရအောင်”
ထိုထဲမှ တစ်ယောက်က စလိုက်သည်။
ထိုတစ်ယောက်ကို ကျန်သုံးယောက်က မဖင့်မဆိုင်း ထောက်ခံသလောက် ကြည်ဆိုသော ကလေးမကတော့
“ဟင့်အင်းကွယ် .. ကြည်တော့မကစားချင်ဘူး၊ အဲဒီမှာ ကောင်ကလေးတွေနဲ့”
သူမမှာ အပျိုကလေးလိုဟန်ဖြင့် သည်အပြောတွင် မျက်လုံးကလေးက စွေလိုက်ပါသေးသည်။
“ဒါဖြင့် မူတို့သွားကစားမယ် ကြည့်ဖာသာနေရစ်”
ကစားဖို့ အဖော်စပ်တိုင်း ကောင်ကလေးတွေကို အကြောင်းပြတတ်သော မြင့်မြင့်ကြည်ကို ကျန်ကလေးမလေး ၄ဦးမှာ မြင်ပြင်းကတ်သလိုဖြင့် တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့လျှက် အနိမ့်ဖက်ဆီရှိ ကစားရုံဖက်သို့ ကလေးများပီပီ အပြေးကလေး လာခဲ့ကြသည်။ ကစားရုံနားရောက်မှ အပြေးရပ်လျှက် …
“သူက ကောင်ကလေးတွေနဲ့လေးဘာလေးနဲ့ ကြီးကျယ်လိုက်တာ၊ သူက သူ့ရည်းစားနဲ့မှ စကားပြောချင်နေတာဆရာ”
ထိုအထဲမှ ကလေးမတစ်ယောက်က စ၍အပြောလိုက်တွင် …
“ဟုတ်ပါရဲ့၊ သူက ရည်းစားနဲ့ဆရာ .. “
ဟုအားလုံးက ထောက်ခံလိုက်သည်။ သူတို့အရွယ်တွင် ရည်းစားဟူသည့် စကားအဓိပ္ပါယ်ကို ပြည့်စုံစွာ နားမလည်သေးသော်လည်း မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် ယောက်ျားလေးတစ်ဦး ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းနေမှုကိုတွေ့လျှင် သို့သော် ကလေးပီပီကစားရင်း ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အရွယ်နှင့်မမျှ ဟန်ပန်များလျှက် ကလေးမဆန်သော အမူအယာမျိုးနှင့် ရောနှောနေလျှင် ရည်းစားဟု မှတ်ယူစွပ်စွဲတတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတို့အားလုံး ကစားရုံထဲသို့ဝင်စတွင် မြင့်မြင့်ကြည်သည် ထိုင်၍ကျန်ခဲ့ရာဖက်သို့ လှမ်းကြည့်မိသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ၁၂နှစ်အရွယ် မြင့်မြင့်ကြည်မှာ ယောက်ျားလေးများသာ ကစားရုံထဲသို့ မလိုက်ချင်ဟု ပြောပြီးနေခဲ့လျှက် သူမဘေးမှာတော့ ၁၄နှစ်အရွယ်ကောင်လေး တစ်ယောက်က ထိုင်နေပါသည်။ ထိုကောင်လေး၏ လက်ထဲတွင် ကျောင်းရှေ့ ပန်းခြံတွင်း၌သာ ရှိလျှက် မာလီအလစ်တွင်သာ ခိုးယူရနိုင်သော နှင်းဆီနီရဲရဲလေး တစ်ပွင့်ကို ကိုင်လျှက် မြင့်မြင့်ကြည်သို့ လှမ်းပေးနေလေသည်။ သည်ပန်းကိုပင် ၁၂နှစ်အရွယ် မြင့်မြင့်ကြည်က မျက်နှာကလေးငုံ့ကာ မျက်လုံးကလေးကိုစွေလျှက် ကြာမူပါပါဖြင့် လှမ်းယူနေတော့သည်။ ဒါကတော့ မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် လူမမယ် ကလေးဘဝ အသက်၁၂နှစ် အရွယ်ကပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ငယ်စဉ်ကပင်စ၍ အလှကြိုက်မှု အကောင်းကြိုက်မှုများဖြင့် နစ်မွန်းလျှက် မိဘအမြှောက်အစားကိုခံကာ ပျက်စီးခဲ့ရသောသူမ၏ ပေါ့လျော့သောစိတ်ဓါတ်တွင် ငယ်စဉ်ကပင် ရည်းစားထားချင်သည့် စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ၁၄နှစ်ဝင်ခါစကပင် အတန်းတူကစားဖက် လူလှလူချော လူခန့်ကလေး မောင်မြနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်လျှက် ရည်းစားဖြစ်ခဲ့လေသည်။
၁နှစ်၂နှစ်ဆိုသော အချိန်ကာလသည် ကျောင်းတက် ကျောင်းဆင်းရင်းဖြင့်ပင် တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် တစ်လပြီးတစ်လ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ပြောင်းလဲ၍ လာခဲ့ချေပြီဖြစ်ပြီး ယခုဆိုလျှင် မောင်မြဦးက ၁၈နှစ်၊ မြင့်မြင့်ကြည်က ၁၇နှစ်ကျော်ခဲ့ပေပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်၍ စာမေးပွဲအောင်လျှင် သူတို့သည် တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို တက်လှမ်းကြ ပေတော့မည်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ခန္ဓာကိုယ် ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးကာ အလှတွေတိုးနေခဲ့သော မြင့်မြင့်ကြည်သည် ယခု ၁၇နှစ်ကျော် အရွယ်တွင်တော့ ငွားငွားစွင့်စွင့် အစွမ်းကုန် ပွင့်နေသည့် ပန်းလေးတစ်ပွင့်နှယ် အလှသွေးတွေ ကြွယ်ကာ လှချင်တိုင်း လှ၍ နေပေတော့သည်။
သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ဖွံ့ဖြိုးလာသည့်နည်းတူ သူမ၏ အတွင်းစိတ်များနှင့် သွေးသားများသည်လည်း ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လိုက်လျှော ညီထွေစွာ ဖွံ့ဖြိုး၍လာခဲ့ပေပြီ။ သည်မှာတင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်သည့်အတိုင်း ဆန္ဒတည်းဟူသော အလိုရမ္မက်သည် သူမ၏ရင်ထဲတွင် ပေါက်ဖွား တည်ရှိ လာလေတော့သည်။ သူမတင်ပဲလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပါ။ မြဦးက သူမထက်ပင် အသက်တစ်နှစ်မျှ ကြီးသူဖြစ်၍ သူလည်းပဲ မြင့်မြင့်ကြည်နည်းတူ ရင်ထဲတွင် ဆန္ဒတရားတို့သည် ကိန်းအောင်းဖြစ်တည်လျှက် ရှိနေပေသည်။
“ကြည်ကြည် မနေ့က ညနေက ဘာလို့မလာတာလဲ။ ကိုကိုဦးဖြင့် စောင့်လိုက်ရတာ”
“ပျင်းလို့ပါ ကိုကိုဦးရာ၊ တနေ့တနေ့ ဒီစကားတွေချည်း ထိုင်ထိုင်ပြီးပြောနေရတာ။”
“အို ကိုယ့်ရည်းစားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး အတူထိုင်နေရတာပဲ ကြည်ကြည်ရာ၊ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်”
“ဟင့်အင်း၊ ကြည်တော့ပျင်းတယ်။ နောက်ဆို ကိုကိုဦးခေါ်ရင် မလာတော့ဘူး”
“ဟင် .. ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ”
ရိုးအလှသူ မြဦီးမှာ ရင်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပင် ပြောချလိုက်သည်။ သူ၏ရင်ထဲတွင်လည်း တကယ်ပင် ညစ်ညူး၍ ကြံရာမရဖြစ်သွားရသည်။
“ကိုကိုဦးကလဲ၊ သူများသမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာပဲဟာ .. ကြည်သွားတော့မယ်”
မြဦးကိုကျောခိုင်းပြီးမှ အသံကိုနှိမ့်၍ပြောကာ သူ့မျက်နှာကိုမှ လှည့်၍မကြည့်တော့ပဲ ကြည်ကြည်မြင့်မှာ လွယ်အိတ်ကလေး တရမ်းရမ်းဖြင့် ထွက်ခွာသွားလေပြီဖြစ်သည်။
“သူများသမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲဟာ” ဆိုသော မြင့်မြင့်ကြည်၏စကားလေးသည် မြဦး၏နားထဲတွင် ပဲ့တင်တွေထပ်၍ ကြားယောင်နေလေသည်။
ရိုးအလှသော မြဦးကတော့ သူများသမီးရည်းစား တွေသည် သူနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ ကဲ့သို့ပင် ရှိလိမ့်မည်ဟု သူက တွေးထင်ထားခဲ့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏ စကားကို မကြားဖူးစဉ်ကတော့ သူ၏စိတ်ထဲတွင် အများတကာ အတွဲတွေလို ဘာမှဆန်းပြားစွာ ရှိလိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့။ ခုတော့ သူမသိသော အချက်ကို မြင့်မြင့်ကြည်က ထောက်၍ပြသွားခဲ့လေပြီ။
“ဘာတွေများထူးခြားလို့ပါလိမ့်” ဟူသော ဆန်းစစ်မှုအတွေးက မြဦး၏ခေါင်းထဲသို့ ဝင်၍လာခဲ့ရသည်။ ဒါဆိုရင် သူများသမီးရည်းစားတွေသည် သူတို့သမီးရည်းစားထက် ဘာတွေထူးခြားနေသည်ဆိုသည်ကို မြဦးတစ်ယောက် သိရှိရန်လိုလာပေသည်။ သိချင်လာတာနှင့်အမျှ သိအောင်လုပ်ရပေတော့မည်။
ထိုသို့အတွေးရှုပ်ယှက်ခတ်ကာနေစဉ်မှာပင် မြဦး၏ခေါင်းထဲသို့ အလင်းရောင်တစ်ချက် ထွက်ပေါ်၍လာရသည်။ ဒါကတော့ သူတို့နှင့်အနီးစပ်ဆုံး သမီးရည်းစားစုံတွဲဖြစ်သည့် ကိုဘသိန်းနှင့် မခင်တိုးတို့စုံတွဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မြဦးသည် ကိုဘသိန်းနှင့်မခင်တိုးတို့ စုံတွဲကို သွား၍သတိရလိုက်မိစဉ်မှာပင် နေ့လည်က သူနှင့်သံချောင်းတို့ အတူလျှောက်လာစဉ် ကိုဘသိန်းကြီးက သံချောင်းကို မခင်တိုးထံသို့ စေခိုင်းသံကြားလိုက်ရသည်။ ဒီည ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုးဆီသွားမယ်တဲ့ … သံချောင်းက မြဦးကို အာချောင်ပြီးပြန်ပြောတာကတော့ မခင်တိုးကြီးအိမ်က လူကြီးတွေအလစ်မှာ ခြံထဲကို ည၉ နာရီလောက် ဆင်းခဲ့ရန် ကိုဘသိန်းက မခင်တိုးကို ပြောခိုင်းသည်ဟု မြဦးသိထားရသည်။ ဒါဆိုရင် ကြာပါတယ်၊ ဒီညပဲ သူတို့အတွဲတွေ ဘယ်လိုဆိုတာကို မြဦးစုံစမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
မခင်တိုးတို့အိမ်ဆိုသည်မှာလည်း တခြားဝေးဝေးလည်းမဟုတ်။ မြဦးတို့အိမ်၏ နောက်ဖက်တွင်ကပ်လျှက်ဖြစ်သည်။ ခြံစည်းရိုးကလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိသည်မဟုတ်တော့ မြဦးတစ်ယောက် ၉နာရီထိုးသည်နှင့် မခင်တိုးတို့ခြံဖက်ကို မှောင်ရိပ်ခို၍ အသာလေးဝင်လာခဲ့သည်။
မခင်တိုးတို့တအိမ်လုံးမှာ မီးရောင်ဆို၍ ဘာမျှမမြင်ရ။ လူကြီးတွေပဲ မရှိလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ပဲ အိပ်ကုန်ကြလို့လားတော့မသိ၊ တအိမ်လုံး တိတ်ဆိတ်၍ နေသည်။ လဆန်း၁၂ရက်၏ ည၉နာရီထိုး လရောင်က သစ်ရွက်တွေကြားမှာ ဝိုးတဝါးထိုးကျ၍နေသည်။ တွေ့ပါပြီ၊ ခြံထဲရှိ ပိတောက်ပင်ပတ်လည်တွင် ဝိုင်း၍ရိုက်ထားသော ဗြက် ၂ပေခွဲလောက်ရှိသော ခုံပေါ်တွင် ကိုဘသိန်းတစ်ယောက် ခြေတွဲလောင်းချကာ ထိုင်၍နေသည်။
မြဦးတစ်ယောက် ကိုဘသိန်းကိုလှမ်း၍ တွေ့မြင်လိုက်ရသည့် တခဏမှာပင် မြဦး၏ဘေးဖက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ တစုံတစ်ဦး လျှောက်၍လာသည်ကို
မြဦးတစ်ယောက် ကိုဘသိန်းကိုလှမ်း၍ တွေ့မြင်လိုက်ရသည့် တခဏမှာပင် မြဦး၏ဘေးဖက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ တစုံတစ်ဦး လျှောက်၍လာသည်ကို သတိထားမိလိုက်ဖြင့် အနီးတွင်ရှိသော စံပယ်ရုံဘေးရှိ မှောင်ရိပ်ထဲသို့ ပြေး၍ကပ်ကာ ပုနေလိုက်ရသည်။ လှမ်း၍ကြည့်လိုက်တော့ လျှောက်လာသူမှာ မခင်တိုးပင်ဖြစ်သည်။
မခင်တိုးသည် ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်၍လာရင်းက ကိုဘသိန်းရှိရာပိတောက်ပင်ကြီးဆီသို့ ဦးတည်၍သွားတော့ရာ မြဦးကလဲ ခါးလေးကိုကုန်း ဇက်လေးကိုပုပြီး မှောင်ရိပ်ကို အကာအကွယ်ယူကာ ပိတောက်ပင်ကြီးဘေးရှိ ဇီဇဝါပန်းခြုံ ကြား ဘေးမှောင်ရိပ်ထဲသို့ တိုး၍ဝင်လိုက်သည်။ မြဦးရောက်ရှိသွားသော နေရာမှာ ကိုဘသိန်းထိုင်နေရာနှင့်ဆိုလျှေင် ၅ပေခန့်သာ ဝေးပေမည်။ ထို့ပြင် သူရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ပိတောက်ပင်းကြီး၏ အရိပ်ကလည်း ထပ်ဆင့် ထိုးကျ၍နေပြီး ဇီဇဝါပန်းရုံ၏ အရိပ်ကလည်း ရှိနေလေရာ အတော်လေးပင် မှောင်မည်း၍ နေလေသည်။
မြဦးတစ်ယောက် ဇီဇဝါပန်းရုံကြီး ဘေးရောက်လာစဉ်မှာပင် မခင်တိုးကလဲ ကိုဘသိန်းကြီး၏ ရှေ့သို့ ရောက်၍လာခဲ့ချေပြီ။
“စောင့်နေတော ကြာပြီလား ကိုသိန်း”
“အင်း အတိုးကလဲ ကြာလိုက်တာကွာ၊ လာမှ လာပါ့မလားလို့။”
“လူကြီးတွေအိပ်အောင် စောင့်ရသေးတယ် အကိုသိန်းရဲ့”
မခင်တိုးက ပြောပြောဆိုဆိုပင် ကိုဘသိန်း၏ဘေးသို့ ဝင်၍ ထိုင်လိုက်လျှင် ကိုဘသိန်းကြီးက ဘာမပြောညာမပြောနှင့် မခင်တိုးကို ဖက်၍ ပါးလေးနှစ်ဘက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် မွှေးကာကြူ၍ နေလေတော့သည်။ မခင်တိုးတော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ။ မြဦးတစ်ယောက်တော့ အသက်ရှူနေတာပင် ရပ်သွားမတတ် ဖြစ်၍သွားရသည်။ အလဲ့ … မခင်တိုးကလဲ အာဂပင်၊ သူမ၏လက်တစ်ဖက်က ကိုဘသိန်းကြီး၏ ခါးကိုပင် ပြန်၍ဖက်ထားလိုက်သေးသည်။
ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုး၏ မျက်နှာလေးကို မွှေးကြူရရုံဖြင့် အားရပုံမပေါ်သေး၊ သူ၏ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးဖြင့် မခင်တိုး၏နှုတ်ခမ်းပါးလေး တွေပေါ်သို့ ဖိကပ်၍ စုပ်နမ်းနေတော့ရာ ကျန်နေသော မခင်တိုး၏ လက်လေးတစ်ဖက်ကပါ ကိုဘသိန်း၏ ကျောပြင်ကြီးကို ဖက်၍၍ထားပြီး သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အတင်းပင် တိုး၍ ဖက်လိုက်ကြသည်ကို မြဦးက သဲကွဲစွာ မြင်လိုက်ရသည်။ မခင်တိုး၏ မျက်လုံးတွေကလဲ မှိတ်၍သွားသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်သော မြဦးတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်လာသည်မသိ၊ တကိုယ်လုံး ထူပူ၍လာရာက နတ်ကျသလို တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်၍လာရတော့သည်။
ဒီအချိန်မှာပင် မြဦးသတိထားမိလိုက်တာက သမီးရည်းစားနှစ်ယောက် တွေ့ရင် စကားတွေ ဖောင်လောက်အောင်ပြောသည် ဟု သူသိထားသည်မှာ မှားယွင်း၍ နေပါပြီကော။ ကိုဘသိန်းနှင့် မခင်တိုးတို့ စကားတွေဘာမျှ မပြောလိုက်၊ တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းသာ ပြောလိုက်သည်ကို သူကြားလိုက်ရသည်ဟု တွေးတောလိုက်မိသည်။
မြဦးကြည့်နေစဉ်မှာပင် ကိုဘသိန်းက မခင်တိုး၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို မလွတ်တမ်း ငုံခဲထားရင်းကပင် သူ၏လက်ကြီးတဖက်က မခင်တိုး၏ နို့အုံတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှပင် ဆုတ်နယ်ခြေမွှ၍ နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သိပ်မကြာလိုက်သော အချိန်တွင်ပင် ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုး၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ခါးမှပွေ့ကာ ခံတန်းပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်၍ ချလိုက်လေသည်။ မခင်တိုးတစ်ယောက် ပက်လက်လေးဖြစ်သွားစဉ်မှာပင် သူမ၏ကိုယ်လုံးပေါ်မှ ပါ၍သွားသော ကိုဘသိန်းကြီးသည် လက်ဖက်က မခင်တိုး၏ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်လိုက်ရာက အင်္ကျီရင်ဘတ် နှစ်ခြမ်းကို ဘယ်ညာဟ၍ ဖွင့်လိုက်သောအခါ ကိုဘသိန်းတော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ၊ မြဦးတစ်ယောက်တော့ ရင်ထဲတွင် ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားပြီး သူ၏မျက်လုံးတွေကိုပင် မျက်တောင်ခတ်ရန် မေ့သွားရလေသည်။ ဘော်လီအင်္ကျီအတွင်းမှ ပြည့်အံကာထွက်နေသာ မခင်တိုး၏ နို့အုံသားတွေသည် အိဖောင်း၍ လရောင်အောက်မှာ ဖွေးနှစ်၍နေလေသည်။ မက်မောစရာကောင်းလှလွန်း၍ ကိုဘသိန်းသည် ခေါင်းကြီးကိုငုံ့ပြီး တရှုံ့ရှုံ့ နမ်းနေတော့သည်။
ကိုဘသိန်း၏ လက်ကလည်း အငြိမ်မနေပဲ မခင်တိုး၏ ဘော်လီအင်္ကျီအနောက်က ချိတ်တွေကိုပါ ဖြုတ်နေလေသည်။ ချိတ်များအကုန် ပြုတ်သွားပြီး ဘော်လီအင်္ကျီကို လှန်တင်လိုက်ကာ နို့အုံနှစ်ဘက်လုံးကို လက်ဖြင့်ဆုတ်၍ နယ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ လရောင်ဖွေးဖွေးတွင် ဖြူဝင်း၍နေသည်။ ကိုဘသိန်းက စိတ်တွေအလွန်ပင် ထကြွလာပုံဖြင့် မခင်တိုး၏နို့တွေကို အတင်းငုံ့၍ စို့လေတော့သည်။
မြဦးတစ်ယောက်တော့ မတ်တတ်ပင် မရပ်နိုင်တော့၊ ဒူးတွေတဆတ်ဆတ် တုန်လာပေပြီ။ ပြီးတော့ တခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးသော ခံစားမှုတွေကလဲ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းရှိန်းဖိန်းဖိန်း ဖြစ်ပေါ်နေလျက် ပုဆိုးတွင်းမှ ဖွားဘက်တော်ကြီးကလဲ တောင်မတ်ပြီး တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလေသည်။
ကိုဘသိန်းကတော့ တရှူးရှူးတရှဲရှဲဖြစ်၍ လာရာက မခင်တိုး၏ ထဘီကိုပင် လှန်၍တင်လိုက်ရာက သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင်ဝင်၍ ဒူးထောက်ကာ ထိုင်လိုက်လေတော့သည်။ မခင်တိုး၏ ပေါင်တံကြီးတွေမှာလည်း လရောင်အောက်တွင် ဖြူဖွေး၍နေပြီး တလုံးတခဲကြီးဖြစ်ကာ တပ်မက်စရာကြီးပင်။ သူတခါမှ မမြင်ဘူးလေသော အရွယ်ရောက်ပြီးမိန်းတစ်ယောက်၏ မမြင်အပ်လေသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို မြဦးသည် တစ်ခုချင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နေရလေပြီ။ ဒါ့အပြင် ယခုသူ့ရှေ့ မြင်ကွင်းကလဲ သူကြားဖူးနားဝသာ ရှိခဲ့ဖူးပြီး မမြင်ဖူးခဲ့လေသော မြင်ကွင်းပင်တည်း။
သူမ၏ ပေါင်ဖြူဖြူကြီးနှစ်လုံးကြားတွင် ကိုဘသိန်းက ဝင်၍ထိုင်လိုက်ရာက ဒူးထောက်၍ သူ၏ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့သည်နှင့် မခင်တိုးသည်လည်း သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲ၍ ထောင်လိုက် လေတော့သည်။ ဒီအချိန်မှာပင် ကိုဘသိန်းက သူ၏လီးတန်ကြီးကို ကိုင်၍ လီးတန်ကြီးထိပ်နှင့် မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုလုံးကို ထိကာ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် အထက်အောက် စုန်ဆန်ကာ ပွတ်သပ် ပေးနေလေသည်။
“အ … အကိုသိန်း … ဟင့် … တော်တော်ကြာ လူကြီးတွေ နိုးလာရင် ခက်မယ် … ဟင့် …”
မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်ဝတွင်လည်း စောက်ရည်များမှာ စိမ့်၍ ထွက်နေချေပြီ။ မခင်တိုးမှာ ဒိထက်ပိုပြီး စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပေ။ အနေရ အထိုင်ရ တော်တော်ခက်နေပုံရသည်။ မခင်တိုး တစ်ယောက်တည်းပင် နေရထိုင်ရခက်လှသည်မဟုတ်၊ မြဦးသည်လည်း ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသဖြင့် မတ်တပ်ပင် မရပ်နိုင်တော့ပဲ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ရသည်။ ဟော ခုတစ်ခါ ထိုင်၍ ကြည့်ရသည်မှာလည်း အားမရသဖြင့် မြဦးတစ်ယောက် မတ်တပ်ထရပ်ကာ ကြည့်နေပြန်လေပြီ။ မခင်တိုး၏ အခြေအနေကို ရိပ်စားမိလေသော ကိုဘသိန်းကလည်း လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုပေါ်တွင် လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် အသာလေး ဖိကာဖြဲလိုက်ပြီး သူ၏လီးတန်ကြီးကို တေ့ကာဖိ၍ လိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။
“အ … အမလေး … ဟင်း … အရမ်း … အရမ်းကြီးဘဲ .. အကိုသိန်းကလဲ … ဒီမှာ နာသွားတာပဲ .. ဟွန်း”
မခင်တိုးက သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ချွတ်ကာ မူမူစူစူလေး ပြောလိုက်သည်။
“တော်တော်နာသွားလားဟင် … အကို လောကြီးသွားလို့ပါ”
“နာတာပေါ့ .. ဖြေးဖြေးလုပ်လဲ ရတာပဲဟာ”
“ခုရော .. ဆက်ပြီးနာနေသေးလား”
“ကဲပါ .. မနာတော့ပါဘူး။ လုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့။ လူကြီးတွေ နိုးကုန်ရင် ခက်မယ်”
သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် ကိုဘသိန်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ တဆုံးဝင်လျက် တစ်လစ်ကြီး ဖြစ်နေသည်ကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်လျှက် လီးတန်ကြီးကလဲ မလှုပ်မရှားပဲ ငြိမ်နေသောအခါ အဆမတန် ရမ္မက်စိတ်တွေ ပြင်းပြလာရသော မခင်တိုးက ကိုဘသိန်း မြန်မြန်လိုးစေရန် လူကြီးတွေကို အကြောင်းပြလျက် လောဆော်လိုက်လေသည်။ ဒါကိုပင် မြဦးက မယောင်မလည်ဖြင့် အိမ်ကြီးဆီဘက်ကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်သေးသည်။
ကိုဘသိန်းကတော့ သူ၏လီးတန်ကြီးကို ညင်သာစွာ ဆွဲ၍ထုတ်လိုက်ရာက စ၍ လိုးနေချပြီ။ ၁၀ချက်မျှ ခတ်ဖြေးဖြေး လုပ်ပြီးသည်နှင့် အားမရနိုင်ဖြစ်၍ လာရသော ကိုဘသိန်းသည် စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်၍ လိုးတော့သည်။ မခင်တိုး ခမျာမှာတော့ မျက်လုံးနှစ်လုံး စုံမှိတ်ထားရင်း ဟင့်ကနဲ အင့်ကနဲပင် ဖြစ်အောင် အားပါးတရကြီးကို ကော့၍ပေးနေတော့သည်။ ဒါ့အပြင် မခင်တိုးက သူမ၏ ဒူးကွေးကာ ထောင်ထားသော ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကို ကုန်း၍ရုန်း၍ လိုးနေသော ကိုဘသိန်း၏ တင်ပါးပြောင်ပြောင်ကြီး ပေါ်သို့ ချိတ်ကာတင်လိုက်ပြီး စောစောကထက်ပင် တိုး၍ ကော့ပေးနေပြန်ပါသည်။ စောက်ရည်ကြည်တွေ အတော်ပင် ရွှဲစိုနေပြီဖြစ်သော မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်ကြီးကြောင့် ‘စွပ်’ ကနဲ ‘ပြွတ်’ ကနဲ ‘ဖွတ်’ ကနဲ အသံတွေမှာလည်း တဖြေးဖြေး သိသိသာသာ ပေါ်ထွက်လာတော့သည်။ မြဦးခမျာတော့ ဆက်လက်၍ကြည့်ဖို့ရာ မစွမ်းတော့ပေ။ သူ၏ တကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေမှာလည်း ဘယ်ကို ရောက်သွားသည်မသိ၊ တကိုယ်လုံး ချိနဲ့နေလေပြီ။ ဒါတင်မကသေး၊ ရင်ထဲတွင်လည်း ဟာတာတာ ဆာတာတာဖြင့် အသက်ရှူရတာလဲ ရင်မောကာ ကြပ်နေလေသည်။ ဒါ့အပြင် ရင်တွေလည်း တဒိန်းဒိန်းခုန်၍ နေပြီး ကိုဘသိန်း၏ ဆောင့်ချက်ကြောင့် လှုပ်ခါနေသော မခင်တိုး၏ နို့အုံကြီးတွေကိုပင် ပြေး၍ ညှစ်ကိုင်ပစ်လိုက် ချင်လာလေသည်။ သူ၏အာရုံထဲမှာတော့ မြင့်မြင့်ကြည် ကလေးကိုသာ ပြေးမြင်ယောင်မိနေတော့သည်။
မြဦးသည် ရပ်၍ကြည့်နေရာမှ အသာလှည့်ပြီး မှောင်ရိပ်ခိုကာ လာလမ်းအတိုင်း ပြန်လာခဲ့လေသည်။ အပြန်ခရီးမှာတော့ မြင့်မြင့်ကြည်ပြောသည့် “သူများ သမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာပဲ” ဆိုတာ ဒါကိုပဲပြောတာလားမသိ .. အို .. ဒါပဲရှိတာပဲ၊ ဒါကိုပဲပြောတာ သေချာပါတယ်၊ ကိုဘသိန်းတို့ လုပ်ကြသလိုမျိုး မြင့်မြင့်ကြည်ကို လုပ်ပစ်လိုက်တော့မယ်။ သူပြောတာ ဒါပဲဖြစ်မှာပါ၊ သေချာပါတယ် … အင်း ဒီညကတော့ အချိန်မရှိတော့ဘူး။ မနက်ဖြန်က ကျောင်းပိတ်ရက်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် မြင့်မြင့်ကြည်အိမ်က လူကြီးတွေ ဈေးဆိုင်ထွက်ကြမှာဆိုတော့ အိမ်မှာ မြင့်မြင့်ကြည်ပဲ ရှိမယ်။ ငါမနက်ဖြန် သွားဖြစ်အောင် သွားရမယ် ဟု တစ်ကိုယ်တည်းပြောကာ နေလေသည်။
အမှန်တော့ ကိုဘသိန်းနှင့် မခင်တိုးတို့သည် ကိုဘသိန်းက အသက် ၂၄ နှစ်၊ မခင်တိုးက အသက် ၂၂ နှစ်ရှိကြပြီး သမီးရည်းစား ဖြစ်ကြသည်မှာလည်း ၆ နှစ်မျှ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ခုလို လင်မယားမကျ ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်လောက်ပင် ရှိနေပြီဆိုသည်ကိုတော့ မြဦးတစ်ယောက် မသိရှာပါပေ။ မြဦးနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ ၂ယောက်မှာတော့ မြဦးက ၁၈ နှစ်ကျော်ကျော်၊ မြင့်မြင့်ကြည်က ၁၈ နှစ်ပြည့်ခါနီးမျှသာ ရှိနေသေးသည်ကို ပြန်လည် မဆန်းစစ်မိခဲ့ချေ။ ဒါ့အပြင် သူတို့နှစ်ဦးသည် ကာမကိစ္စကို ယခု လက်တည့်စမ်းရန် ကြံရွယ်ရုံသာ ရှိကြသေးပြီး ပြောရမည်ဆိုလျှင် မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပါးဖြူဖြူမို့မို့လေးများကိုပင် တခါမှ မမွှေးကြူခဲ့ဖူးပေ။ ခုတော့ဖြင့် အတုမြင် အတတ်သင်ဆိုတာမျိုးလို မြဦးတစ်ယောက် တည်ငြိမ်နေသော သူ၏ရင်တွင် ဂယက်လှိုင်းများသည် ကြောက်ခမန်းလိလိ ရိုက်ခတ်နေရပြီ ဖြစ်ပါတော့သည်။
ထို့နောက် လမ်းထိပ်ကိုထွက်ကာ သံချောင်းကိုရှာ၍ မြင့်မြင့်ကြည်ထံ စာသဝဏ် ပါးလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ စိတ်ချလက်ချဖြင့် အမေပေးလိုက်သော မုန့်ဖိုးဖြင့် ဘာဘူကြီးဆိုင်တွင် လက်ဘက်ရည်ဝင်သောက် နေလေသည်။
နေ့လည်၁၂နာရီမထိုးမီမှာပင် မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ အိမ်ရှိရာသို့ ထွက်၍ လာခဲ့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်တို့အိမ်မှာ တိုက်ခံနှစ်ထပ်အိမ် ဖြစ်သည်။ သူရောက်သွားတော့ အိမ်ရှေ့တံခါးမှာ အဆင့်သင့်ဖွင့်ထားသဖြင့် ခါတိုင်းလိုပင် မြဦးသည် အိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။ အိမ်အောက်ထပ်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်၍နေသည်။ အိမ်ရှေ့တွင် ဘယ်သူမှမရှိသဖြင့် မြဦးသည် အောက်ထပ်တွင်ပင် ရှိနေသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းရှိရာသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။
မြဦးတစ်ယောက် မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းရှေ့သို့ ရောက်ပါပြီ။ တံခါးပိတ်ထားသဖြင့် လက်ဖြင့်အသာတွန်းကြည့်ရာ တံခါးရွက်၂ချပ်သည် စေ့ထားသဖြင့် အလိုက်သင့်ပင် ခပ်ဟဟလေး ပွင့်၍ သွားလေသည်။
မြင့်မြင့်ကြည်ကို မှန်တင်ခုံရှေ့တွင် ထိုင်၍ အလှပြင်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ရေချိုးပြီးခါစတော့ ဟုတ်မည်မထင်။ တံခါးဝကို ခပ်စောင်းစောင်းလေး နောက်ကျောပေး၍ ထိုင်နေသော မြင့်မြင့်ကြည်ထံသို့ မြဦး၏ အကြည့်တွေက ရောက်သွားပြီး တခဏလေးမှာပင် မို့မို့လေး ဖောင်း၍နေသော သူမ၏ ရင်အုံလေးနှင့် ကား၍ အိဖောင်းကာ ပြည့်တင်းနေသော သူမ၏ တင်သားတွေဆီသို့ မြဦး၏ အကြည့်တွေက ရောက်ရှိသွားခဲ့ရလေပြီ။
မြင့်မြင့်ကြည်သည် မခင်တိုးလောက်တော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် မဖွံ့ဖြိုးသေးသော်လည်း သူ့ဟာနှင့်သူတော့ အတော်လေးလှ၍ နေသည်ဟု မြဦးက မှတ်ချက်ချလိုက်မိရင်း မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ လှမ်း၍ ဝင်လိုက်ရာ မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ သူ့ဆီသို့ လှည့်အကြည့်ဖြင့် ဆုံကြလေသည်။
“လာ … ကိုဦး … ထိုင်လေ”
အခန်းထဲတွင် ထိုင်စရာနေရာရှာလိုက်တော့ မြင့်မြင့်ကြည်အိပ်သည့် ကုတင်လေးတစ်လုံးသာ ရှိလေသည်။ မြဦးကလဲ အရင်မြဦးမဟုတ်တော့သဖြင့် ခပ်တည်တည်ပင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက်သည်။
ကုတင်လေးပေါ်သို့ မြဦးတစ်ယောက် ထိုင်ချလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်း မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ မှန်ရှေ့မှထလာကာ မေးလိုက်သည်။
“ကိုဦးက ကြည့်ကို ၂ယောက်တည်းတွေ့ချင်တယ်ဆို?”
“တို့ သမီးရည်းစားတွေပဲဟာ … ၂ယောက်တည်းဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိတာပေါ့”
မြင့်မြင့်ကြည်၏မျက်နှာလေးမှာ ပြုံးစစလေး ဖြစ်၍သွားရာကပင် မြဦး၏ဘေးသို့ ထိုင်၍ချလိုက်သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်ထံမှ မွှေးပျံ့သော သင်းရနံ့တို့သည် မြဦးဆီသို့ တည့်တည့်မတ်မတ်ပင် ဝင်ရောက်၍ လာရာက မြဦး၏ ရင်ကို ထိုးဆွ၍နေချေပြီ။ မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်ရှိရာဖက်သို့ ငဲ့စောင်းကာ ကြည့်လိုက်မိသည်။
ဒီနေ့မှပင် မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် ခါတိုင်းကျောင်းသွားစဉ်ထက်ပင် ပို၍လှနေသေးသည်။ သေသေချာချာကို ဂရုတစိုက်ဖြင့် အလှပြင်ထားပုံ ရလေသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏မျက်နှာလေးက ငုံ့လျှက် ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်ကို စူးစိုက်ကာ ကြည့်နေလေသည်။
သူတို့နှစ်ဦးသားမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စကားမဆိုမိကြပဲ ငြိမ်သက်၍ နေကြလေသည်။ တချက်တချက်တွင် အခန်းပြူတင်းပေါက်မှ ဝင်၍လာသော လေပြေလေးများကသာ မြဦးနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ကို တိုးဝှေ့ဖြတ်သန်း သွားကြသည်။
မြင့်မြင့်ကြည်နှင့် ယှဉ်တွဲထိုင်နေရာက စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာသော မြဦး၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ပုံခုံးထက်ဆီသို့ ကျရောက်၍သွားရာက မြင့်မြင့်ကြည်၏ နုထွေးသော ပုခုံးလုံးလုံးလေးကို သူ၏လက်ဖဝါးဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း
“ကြည် ကိုဦးကို ချစ်လား … ဟင်”
မြဦး၏ စကားသံကပုံမှန်ထက်ပင် တုန်ခါ၍နေရသလို မြင့်မြင့်ကြည်၏ မို့မောက်မောက်လေး ဖြစ်နေသော ရွှေရင်နှစ်မွှာသည်လည်း နိမ့်ချည်မြင့်ချည်လေး ဖြစ်၍လာလေသည်။ မြဦး၏ တုန်လှုပ်လှိုက်ဖိုသော အမေးစကားကို ကြားရသောအခါ ရင်ထဲတွင် နွေး၍သွားရကာ မြဦးကိုလည်း အံ့သြ၍သွားရသည်။
ဟု မြင့်မြင့်ကြည်က တိုးတိုးလေး ဖြေလိုက်ရင်းက ရီဝေသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် မြဦးကို လှည့်၍ ကြည့်လိုက်သည့် ခဏမှာပင် မြဦးနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ မျက်နှာနှစ်ခုမှာ ထိလုမတတ် ကပ်၍သွားခဲ့ရပြီး မျက်လုံးချင်းလဲ ဆုံမိကြလေသည်။
ကျန်နေသော မြဦး၏လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ ထပ်မံကျရောက်လာပြီးလျှင် ခဏချင်းမှာပင် မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲယူပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး ပါးဖောင်းဖောင်း ဖြူဖြူမို့မို့လေးများအား မွှေးကြူလိုက်တော့သည်။
ချစ်စရာ့အသွင် မျက်နှာလေးကို မော့၍ပေးလိုက်ရင်းကပင် ရင်ထဲမှ ပြင်းပြလာသော ပီတိအဟုန်တို့ကြောင့် မြင့်မြင့်ကြည်သည် မြဦး၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ပြန်၍ ဖက်တွယ်လိုက်မိသည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုး ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကို စိတ်ကူးယဉ်ကာ မျှော်လင့်ခဲ့ရလေသော မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် သူမ၏ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြည့်စုံခဲ့ရပေပြီ။ သူမသည် မြဦးကိုလည်း နားမလည်နိုင်စွာဖြစ်လျက် အံ့သြကြေနပ်၍လည်း နေမိသည်။ မြဦး နမ်းသည်ကို အားရကြေနပ်စွာ အနမ်းခံနေသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ မျက်နှာလေးသည်ပင် ပြုံးယောင်လေးသန်း၍ နေလေသည်။
မြဦးက မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပါးပြင်နှစ်ဘက်ကိုသာမက နဖူးဆံစပ်လေးများနှင့် မေးဖျားလေးကိုပင် မွှေးကြူကာ နမ်းနေပါသေးသည်။ ပြီးတော့မှ မြဦးက သူ၏မျက်နှာကို အသာခွာကာ မြင့်မြင့်ကြည်၏ မျက်နှာလေးကို စိမ်းစိမ်းလေး တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှ သူ၏ နှုတ်ခမ်းတွေက မြင့်မြင့်ကြည်၏ နှုတ်ခမ်းလုံးလုံးလေးတွေပေါ်သို့ ဖိကပ်ကာ စုပ်နမ်းလိုက်ပါတော့သည်။
နှစ်ဦးလုံး၏ အစိမ်းသက်သက်သာ ရှိလေသော သွေးသားတို့သည် ဟုန်းကနဲ နိုးကြွကာ ထ၍လာခဲ့ရချပြီ။ ဒီလိုနမ်းနေရင်းမှပင် မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တဖြေးဖြေး အိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲချရင်း တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ထားမိသလို မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ မြဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းပင် သိမ်းကြုံး၍ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်မိပါသည်။
အတုမြင် အတတ်သင် ဆိုသလိုပင် မြဦးသည် သူဖိထားလေသည့်အတိုင်း လက်တွေကလဲ အငြိမ်မနေပဲ မြင့်မြင့်ကြည်၏ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်နေရုံမျှမက တင်သား လုံးလုံးဖောင်းဖောင်းတွေကိုပါ ဆုတ်နယ်ပေးနေပြန်ပါသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်မှာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းပင် သူမကိုယ်သူမ မသိ၊ ဖြင်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သလို ခံစားနေရာမှ တကိုယ်လုံး အားအင်တွေ ဆုတ်လျော့၍ လာရသလို နွမ်းနယ်၍ လာရပါလေတော့သည်။
မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်ဝတ်ထားသော အင်္ကျီလေးအပေါ်မှပင် သူမ၏ စူစူမို့မို့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို ဖိကပ်ကာ နမ်းနေလေသည်။ ပြီးတော့မှ ရင်စေ့အင်္ကျီလေးကို ကြယ်သီးတွေ တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ကာ တဆက်တည်းမှာပင် ဘော်လီအင်္ကျီလေးကိုပါ ကြယ်သီးတွေ ဆက်၍ ဖြုတ်ပေးလိုက်တော့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်မှာ ပက်လက်လေး လှန်ကာ ရီဝေသောမျက်လုံးများဖြင့် မြဦးကိုကြည့်လျက် မောင့်မျက်နှာ တစ်ရွာထင် ဆိုတာလို မြဦးပြုသမျှ နုရတော့မည့်အသွင်နှင့် ပက်လက်လေး လှဲနေလေသည်။ သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ငြိမ်သက်၍နေသ်ာလည်း သူမ၏ အတွင်းစိတ်များမှာတော့ လှုပ်ရှား၍ နေသည်ဆိုသည်ကိုတော့ လက်ဖျားနှစ်ဖက်ဆီမှ လက်ချောင်းလေးများ၏ လက်ဆစ်လေးများကို တဖျောက်ဖျောက် ချိုးနေသည်ကို မြင်ရခြင်းဖြင့် သိသာနိုင်လေသည်။
“အို .. အကို…”
မြင့်မြင့်ကြည်မှာ သူမ၏ မျက်လုံးလေးနှစ်ဘက်ကို စုံမှိတ်လိုက်ရင်း သူမ၏ မျက်နှာလေးကိုလဲ တစ်ဖက်သို့ စောင်းငဲ့ကာ လွှဲလိုက်လေတော့သည်။ မွေးညင်းနုလေးများ စိမ်းမြမြဖြင့် မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား ဖောင်းဖောင်းလေးနှစ်ခု ပြဲဟသွားလေသော အခါတွင်တော့ နီရဲလျှက် အထပ်ထပ် အလွှာလွှာ ပန်းပွင့်ပမာဖြစ်၍ နေလေသော စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးများသည် စိမ့်ထွက်နေပြီဖြစ်သော စောက်ရည်ကြည်လေးများကြောင့် ပြောင်လက်ရွှမ်းစိုစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့လေသည်။ ထိပ်ဘက်နားဆီမှ စောက်စေ့နီနီရဲရဲလေးကလဲ အသည်းယားစဖွယ် ငေါက်တောက်လေး ထောင်၍ နေတော့သည်။
ပြောင်တင်းကာ အရည်ကြည်လေးများ စိမ့်ထွက်၍နေသော မြဦး၏ လီးတန်ထိပ်ဖူးကြီးသည် သူမ၏ စောက်ပတ်ဝ အတွင်းသား နုနုလေးများကို ပူနွေးစွာဖြင့် တွေ့ထိလာလေတော့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်သည် အသက်ကို ဝအောင် ရှူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်း၂ဘက်ကို တင်းတင်းလေးစေ့ကာ မာန်တင်းလိုက်မိသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ရမ္မက်ဇောတွေ ပြင်းပြကာ စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့သော မြဦးသည် သူ၏ သီးတန်ကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ခေါင်းနုနုလေးထဲသို့ တအားပင် ဖိ၍ သွင်းလိုက်လေသည်။
“ဗျစ် .. ဗျစ် .. အား ..အမလေး .. သေပါပြီ … ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်”
မြင့်မြင့်ကြည်မှာ သူမ၏ ခါးသေးသေးလေးသာ ကော့တက်သွားသည်မဟုတ် သူမ၏ ကျောပြင်လေးပါ ကော့၍ သွားရလေသည်။ ပြီးတော့ အသားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ စောစောက စောင်းငဲ့ထားသော မျက်နှာလေးကတော့ မော့၍လာပေမယ့် ရှုံ့မဲ့နေလေသည်။ မြဦးသည် ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွားပြီး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြင့် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်နေလေသည်။
ပြိးတော့မှ မြဦးသည် သတိရသွားပြီး လီးတန်ကြီးကို ဆွဲချွတ်တော့မလိုလုပ်ပြီးမှ စိတ်ပြောင်းကာ မချွတ်တော့ပဲ လီးတချောင်းလုံးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ တဆုံးသွင်းထားလျှက် သူ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ထွေးနေအောင် ဖက်ကာ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့၍ ပေးနေလေတော့သည်။
စောက်ခေါင်းထဲတွင် အတော်ပင် နာအောင့်၍ သွားရသော မြင့်မြင့်ကြည်သည် နဂိုကပင် ရမ္မက်ထန် တဏှာကြီးသော ဗီဇက ပါလာ၍လားမသိ။ နာလွန်း၍ အော်ဟစ်က ညီးတွားလိုက်ရသော်လည်း သူမ၏ အော်ဟစ် ညီးတွားသံအဆုံးတွင် ထိုကဲ့သို့ စောက်ခေါင်းထဲ နာကျင်၍ အောင့်သွားရသည်ကိုပင် ရင်ထဲတွင် ကျေနပ်၍ သွားရလေသည်။
အရှက်တရားဆိုသည်ကတော့ သူမ၏ ရင်ထဲတွင် လုံးလုံးလျားလျား မရှိတော့ပေ။ ကြည့်ပါဦး၊ နို့စို့နေသော မြဦးထံသို့ သူမ၏ နို့လေးတွေကိုပင် ကျောလေး ကော့ကာ ကော့ကာဖြင့် ပင့်ကပ်ကာ ပေးနေသလို တတ်ကျွမ်းမှု မရှိသေးသဖြင့်လည်း သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချာင်းကို ကားသထက်ကားကာ စောက်ပတ်လေးကို မြဦး၏ လီးတန်ကြီးအရင်းသို့ အတင်းပင် ဖိကပ်၍ ပေးနေမိချေသည်။ လက်တဖက်ကတော့ မြဦး၏ ကျောပြင်ကြိးကို သိမ်းကြုံး၍ ဖက်ထားပြီး ကျန်လက်တဖက်က မြဦး၏ ဦးခေါင်းမှ ဆံပင်တွေကို သွယ်လျှ ပြည့်ဖောင်း၍ နေသော လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ထိုးဖွ၍ နေလေသည်။
မြဦးမှာ မြင့်မြင့်ကြည် နာလွန်း၍ အော်သဖြင့်သာ အရှိန်သတ်လိုက်ရသည်၊ သူ၏ စိတ်တွေကတော့ အဆမတန် ရမ္မက်တွေထန်နေရလေသည်။ လိုးချင်စိတ်တွေ များလာသော မြဦးက မြင့်မြင့်ကြည်၏ အခြေအနေကို ကြည့်လိုက်သေးသည်။ နာသေးလား ဟု မေးရန် စိတ်ကကြံလိုက်သေးပေမယ့်လည်း ပါးစပ်က ပြောမထွက်၊ မြင်ရသော အခြေအနကတော့ မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် နာကျင်ပုံမရတော့။
ဆွဲထုတ်လိုက်ပါပြီ၊ မြဦးသည် သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးတန်ကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ မြင့်မြင့်ကြည်၏ ခါးလေးမှာ ကော့၍ သူမ၏ စောက်ပတ်ဝလေးမှာ လီးတန်ကြီးနောက်သို့ လိုက်ပါလာသယောင်ပင် ရှိနေတော့သည်။ ပြီးတော့မှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ပြန်၍ သွင်းကာ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးလေတော့သည်။
မြဦး၏ ဆောင့်ချက်ကြောင့် အင့်ကနဲ တချက်ဖြစ်သွားရသော်လည်း မာကြောလွန်းသော လီးတန်ကြီးကြောင့် သူမ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသား လေးများမှာ အီစိမ့်၍ သွားရသလို ရင်ထဲတွင်လည်း ကျေနပ်သွားလေသည်။ မြဦးကလဲ ညှာတာရကောင်းမှန်း မသိတော့ပဲ အတင်းပင် ဆောင့်၍ လိုးပေတော့ရာ စောက်ပတ်အသစ်စက်စက် ပါကင်လေးဖြင့် အလိုးခံနေသော မြင့်မြင့်ကြည်မှာ နာကျင်မှုကို ပူးတွဲခံစားနေရသော်လည်း ဒီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်တာကိုပင် သူမ၏စိတ်ထဲမှာ အားရကျေနပ်နေလေသည်။
မြဦးကတော့ သူ၏ ကိုယ်လုံးကြိးကို သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်မှကြွကာ မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေး ဘေးတဖက်စီတွင် လက်ကိုထောက်၍ စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်နေသဖြင့် မြဦး၏ ဆောင့်ချက်များမှာ အထူးပင် ပြင်းထန်လှကာ နှစ်ဦးစလုံးမှာ တခါမှ မကြုံခဲ့ဖူးလေသော ထူးခြားလှသည့် အရသာကို တမေ့တမောကြီး ခံစားနေရလေသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏ စိတ်ထဲရင်ထဲတွင်လည်း မြဦးကို ခင်တွယ်သည့်စိတ် ချစ်တဲ့စိတ်များ ပို၍ပို၍ တိုးပွားလာရသလို မြဦးကလဲ မြင့်မြင့်ကြည်အပေါ်တွင် ကြင်နာစိတ်များ ချစ်စိတ်များ ပို၍ တိုးလာလေတော့သည်။
မကြာလိုက်ပါချေ၊ မြဦး၏ လိးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ အတင်းဆောင့်ကာ လိုးသွင်းပြီး ဖိကပ်လိုက်ချိန်မှာပင် မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ သူမ၏ စောက်ပတ်ကို အတင်းပင် ကော့တင်ပေးကာ သူတို့နှစ်ဦးလုံး၏ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုသည် တလွန့်လွန့်လူး၍ တွန့်ကာ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်သွားရပါလေတော့သည်။
ကိုစိုး ရဲ့ အလို ကျ